उद्यमशील बन्नको लागि सोच चाहिन्छ -
३० असार २०७८, बुधबार ०२:०३ Tamakoshi SandeshLeaveaComment on उद्यमशील बन्नको लागि सोच चाहिन्छ
बेरोजगारी समस्या राष्ट्रको जल्दोबल्दो समस्या हो । दैनिक हजारौँ युवाहरू कामको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । विदेश जाने युवाहरूको ताँती हेर्दा लाग्छ नेपाल अदक्ष मजदुर उत्पादन गर्ने मुलुक हो । यसको अर्थ यो देशमा रोजगारीको कुनै अवसर नै छैन र केही गर्नै सकिँदैन भन्ने पक्कै होइन । राज्यको तर्फबाट झिनै भए पनि केही प्रयास भने भएको देखिन्छ । बेरोजगारीको अन्त्य गर्दै देशभित्रै रोजगारीको विकास गर्ने उद्धेश्यले स्थापना भएको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष यस्तै प्रयासमध्ये एक हो । यसको नेतृत्व समालेका छन्, डा.कल्याण रोक्काले । खोटाङका रोक्कालाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ४ वर्षका लागि कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । चीनको ‘इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी अफ बिजनेस एन्ड इकोनोमिक्स’बाट राजनीतिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका रोक्का सन् २००१ देखि २००५ सम्म प्राध्यापन पेसामा संलग्न थिए। रोक्काका दुईवटा पुस्तक प्रकाशित छन् भने विभिन्न जर्नलमा लेखसमेत छापिएका छन् । उनै रोक्कासँग गरिएको कुराकानीको अंश ः
० युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको परिचय र उद्धेश्य के–के हुन बताउनुहोस् न ।
देशमै पुँजीको व्यवस्था गरी देशको उत्पादनशील र सीपयुक्त युवा जनशक्तिलाई पुँजी र कामको अभावमा विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल सरकारबाट विस. २०६५ सालमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना गरिएको हो । कोषले उत्पादनशील श्रमको अधिकतम उपयोग तथा उद्यमशीलताको विकासमार्फत् परम्परागत उत्पादन प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने तथा सीपयुक्त बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । स्थानीय श्रोत, साधनको समुचित प्रयोग हुने गरी मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिद्वारा स्वरोजगारमूलक व्यवसायिक परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीयस्तरमा सुलभ र सुरक्षित व्यवसायिक कर्जा उपलब्ध गराई उद्यमशिलताको विकासमार्फत मुलुकभित्र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिलाई आर्थिकरूपमा सक्षम, सामाजिकरूपमा जिम्मेवार, सास्कृतिकरूपमा जागरुक एवं सिर्जनशील बनाई स्वरोजगार कार्यक्रमहरूमा उनीहरूको सहज पहुँच, प्रयोग र स्रोत परिचालन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरी अपनत्व र स्वामित्वको अनुभूति गराई स्वरोजगार÷रोजगार सिर्जनाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन युवा स्वरोजगार कोषका नियमित तथा थप कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू सञ्चालित भइरहेका छन् । आर्थिक रूपले विपन्न महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, द्वन्द्व पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्ति वा समुदाय, गरीब किसान, मजदुर, सुकुम्बासी वा साना व्यवसायी एवं युवाहरू तथा परम्परागत सीप भएका जात जातिहरूलाई व्यवसायिक खेती, पशुपंक्षीपालन, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहुलियत ब्याजदरमा प्रतिव्यक्ति रु. दुई लाखसम्म आवधिक ऋण उपलब्ध गराई तिनीहरूको आय आर्जनमा वृद्घि गरी जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउनु मुख्य उद्देश्य रहेको छ । कोषको अन्य उद्देश्यहरू देहाय वमोजिम रहेका छन्ः रिक्सा, अटोरिक्सा, ठेलागाडा व्यवसाय, दुग्धजन्य व्यवसाय, प्लम्बिङ, इलोक्ट्रोनिक्स तथा इेक्ट्रिकल, साना तथा घरेलु व्यवसाय, सिकर्मी तथा डकर्मी, रंग–रोगन, सिल्पकार, खुद्रा तथा किराना पसल सञ्चालनजस्ता स्वदेशी श्रम, सीप, ज्ञान एवं सानो पूँजीबाट सञ्चालन गर्न सकिने स्वरोजगार कार्यमा ऋण उपलब्ध गराउने । स्थानीय सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित तथा स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने वस्तुको व्यवसायिकरणमा योगदान पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । ‘एक गाँउ–एक उत्पादन’ र ‘एक परिवार–एक रोजगार’जस्ता परियोजनामा लगानी गर्ने ।
म युवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु की हामीकहाँ सस्तोमा कर्जा उपलब्ध छ । कर्जा लिनुहोस् । के जानेको छ ? के गर्ने योजना छ ? के लक्ष्य लिएको छ ? आफ्नो व्यवसायिक प्रस्ताव वित्तीय संस्था र सहकारीमा प्रस्ताव गर्नुहोस् हामीले सस्तोमा कर्जा उपलब्ध गराएका छौँ, जसको कारण तपाईं व्यवसायी बन्न सक्नुहुन्छ, उद्यमी बन्न सक्नुहुन्छ । यहीँ पौरख गर्नुपर्छ, यहीँ पसिना बगाउनु पर्छ । हाम्रो स्वरोजगार पनि यही हुन्छ । मुलुकलाई पनि हामीले सम्मृद्ध बनाउन सक्छौँ । बाहिर जाने युवाले जे भोगिरहेका छन त्यत्तिको मेहनत र परिश्रम यही गर्ने हो भने हामी यही आफू पनि सम्पन्न हुनसक्छौँ र मुलुक पनि बन्छ । हाम्रो आफ्नो समस्या पनि सम्बोधन गर्न सक्छौँ । म यही कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।